Jadon Sancho Oo War Baahinta La Hadlay Markii Ugu Horaysay-Miyuu Mustaqbalkiisa Dortmund Iyo Man United Ka Hadlay? - Gool24.Net
Jadon Sancho Oo War Baahinta La Hadlay Markii Ugu Horaysay-Miyuu Mustaqbalkiisa Dortmund Iyo Man United Ka Hadlay?
Da’yarka kooxda Borussia Dortmund ee Jadon Sancho oo si xoogan loola xidhiidhinayay kooxda Manchester United ayaa markii ugu horaysay war baahinta la hadlay tan iyo markii ay kooxdiisa Dortmund sida rasmiga ah ugu dhawaaqday in aanu kooxda ka bixin doonin xagaagan.
Kooxda Borussia Dortmund ayaa caawa bilaabtay diyaar garowga xili ciyaareedka cusub ee Bundesliga waxayna guul wayn oo 6-0 ah ka gaadhay kooxda Altach oo ay Switzerland kula ciyaartay wuxuuna Sancho kulankan ka ciyaaray 45 daqiiqo.
Markii uu kulankani soo dhamaaday waxa uu Jadon Sancho la hadlay warbaahinta isaga oo amaan ugu qubeeyay ciyaartoyda kooxdiisa isaga oo muujiyay in uu waqti dheer sii joogi karo kooxda bixitaankiisa inta badan laga hadlayay.
Man United ayaa loo sheegay in ay bixiso 120 milyan yuro haddii ay doonayso saxiixa Jadon Sancho laakiin markii ay maamulka Old Trafford wada xaajoodka sii dheereeyeen waxay Dortmund go’aan buuxa ku gaadhay in Sancho aanu kooxdooda ka bixi doonin xagaagan.
Jadon Sancho ayaa ciyaartoyda kooxdiisa Borussia Dortmund waxa uu ku sifeeyay kuwo khaas ah oo uu aad ugu faraxsan yahay in uu ka tirsan yahay.
Jadon Sancho oo saxaafada la hadlayay ayaa yidhi: “Waxaanu helnay ciyaartoy da’yar ah oo khaas ah oo soo baxaya. Xaqiiqdii waxaan ku faraxsanahay in aan iyaga la wadaago garoonka oo aan iyaga hogaamiyo”.
Waxa uu Jadon Sancho ku dooday in ciyaartoyda da’yarta u badan ee kooxdiisa Dortmund u soo baxaysa uu mar xidhnaa kabaha ay hadda xidhan yihiin oo uu da’yar ahaa wuxuuna yidhi: “Mar ayaan kabahooda xidhnaa oo aan la ciyaarayay kooxda waa waynka. Waan ku faraxsanahay iyaga”.
“Anigu waxaan ku soo biiray aniga oo 17 sano jir ahaa, wiilasha qaar ayaa la da’ ah. Halkaas ayaan joogay oo aan taas sameeyay. Iyaga waxaan ku hogaamin karaa waxa fiican iyo waxa aan fiicnayn. Sidoo kale waxaan rajaynayaa in aan iyaga dhiiro galiyo”. ayuu Sancho hadalkiisa raaciyay.
Xidigii ay Man United dhawaan u wayday Borussia Dortmund ee Jude Bellingham ayaa kulankiisii ugu horeeyay ka soo muuqday Dortmund waxaana sidoo kale laba gool dhaliyay Haaland oo ay United saxiixiisa seegtay suuqii January.